Izisombululo - gomymobi.com
Izibonelelo Izisombululo ezinamandla
Yenza ishishini lakho impumelelo & bhabhela phezulu !!!
gomymobi.com yenzelwe ukukunceda ukuba wakhe indawo zakho zeshishini ngokukhawuleza, ngokulula nangokufanelekileyo. Zonke izixhobo ezibalulekileyo zokubonisa ishishini lakho kunye neemveliso zobugcisa kwihlabathi.
Fumanisa ngakumbi izinto ezingezantsi ezinamandla onokuzisebenzisa ukuyila nokulawula ubukho bakho kwi-Intanethi.
okanye Qalisa ngoku
Masiveze igama lakho lophawu kunye neemveliso eziphambili zoyilo kuwo wonke umntu emhlabeni kunye nomakhi wevenkile yakho ye-eCommerce. Sinceda ukuba wenze iivenkile ezingenamda, ukuthengisa iimveliso ezingenamda; akukho ntlawulo yokuthenga, akukho ntlawulo yokuqesha; uyakufumana i-100% yentlawulo ngento oyithengisayo.
Ivenkile evulekileyo kwaye uthengise
Abathengi bethu abaMangalisayo bathanda izisombululo ezimangalisayo
Injongo yethu yokuqala ijolise ekwenzeni abathengi bethu bonwabe. Ewe, le yindlela esisebenza ngayo kwishishini lakho, nathi.
Phambi kweSisombululo seShishini
Umhleli weKhowudi yesiqhelo
Imirhumo kunye nezinto ezilungileyo
Qalisa ukwakha iiwebhusayithi zakho zeshishini ukusuka ekuqaleni okanye ukhethe kwiitemplate ezininzi ezenziwe ngumyili. Ngoyena mhlaba wehlabathi utsala kwaye ulahle umakhi wewebhusayithi, unokuyila kwaye uphuhlise nayiphi na iwebhusayithi oyifunayo okanye oyifunayo.
Zama i-Element Builder SIMAHLA
Qhoboshela iziseko zophuhliso zeshishini nakweyiphi na indawo. Zonke i-eCommerce, ukusasaza, kunye nezisombululo zobulungu zigcinwa ngokupheleleyo kwaye ziza nokuziphatha okwakhelweyo ngaphakathi.
Yakha usetyenziso lwewebhu oluphambili usebenzisa umhleli wekhowudi yesiko ukongeza okanye ukuhlela nantoni na oyifunayo. Lawula wonke umxholo onzima emva kwezigcawu kwaye uwubonise kakuhle ekuphenduleni ukuphinda ubeko.
Thengisa imirhumo ngalo naliphi na ixesha, ubulungu kunye neephakeji zeenkonzo, izinto ezibonakalayo, umxholo, uluntu kunye nesoftware. Unikezelo oluphindaphindiweyo okanye lokuhlawula ixesha elinye ngeendlela ezininzi zamaxesha olingo usebenzisa iindidi ezahlukeneyo zabanikezeli bentlawulo.
SIMAHLA kwiwebhusayithi yakho yeshishini
gomymobi.com kuyakuvuyela ukukunceda wenze indawo yakho yokuqala yeshishini, kwaye uyisingathe SIMAHLA ebomini.
Ubhaliso lulula kakhulu kwaye luyakhawuleza, akukho khadi lekhredithi lifunekayo; kwaye iakhawunti yakho yasimahla kunye newebhusayithi yeshishini hlala nathi ngonaphakade.
Vula iivenkile ezingenamkhawulo
Ukuba ufuna ukuvula iivenkile ezingenamda kwi-Intanethi ukuthengisa iimveliso ezahlukeneyo, unokuzenza ngokulula.
Thengisa iimveliso ezahlukeneyo
Ngeqonga lethu le-eCommerce, uyakwazi ukuthengisa zombini iimveliso zedijithali kunye nezomzimba, kunye nemirhumo kwivenkile enye ngokulula.
Igama Lommandla Wesiqhelo
Ukuba sele unedomain kwaye ufuna ukuyisebenzisa kwiwebhusayithi eyenziweyo, kufuneka unikezele le domain kuphela emva koko usebenzise iwebhusayithi yakho yeshishini ngale ndawo yesiko. Indawo yakho yeshishini ijongeka ingcali ngakumbi kwidomeyini yesiko.
Ukuba unomphathi wabucala kwaye ufuna ukusingatha iwebhusayithi yakho eyenziweyo, sinesixhobo esilula ukukunceda ukuba ulayishe zonke iifayile zewebhusayithi kumamkeli wakho ngonqakrazo olunye. Okanye unokukhuphela indawo yonke ekuhlaleni.
I-subdomain eyahlukileyo kuyo yonke indawo
Uyakwazi ukupapasha nokugcina indawo yakho yeshishini ngonqakrazo olunye kuphela.
Umrhumo ongenakufikeleleka kwaye ubhetyebhetye
Nje ukuba wanelise ngezisombululo zethu, sinikezela ngobhaliso oluninzi olufanelekileyo lokuphucula iakhawunti yakho ukuze ufumane amanqaku anamandla ngakumbi.
Zuza ngokuthengisa Umxholo License
Uyakwazi ukufumana imali nathi, ngokuthengisa iilayisensi zakho zomxholo kwabanye abasebenzisi. Uyakufumana yonke ingeniso, asibizi ntlawulo.
Indawo yeNtengiso yeWebhusayithi
gomymobi.com ikwayindawo yabo bonke abasebenzisi ukuba bathengise imixholo yabo abayithandayo, abaqulunqi banokubonelela ngomxholo wasimahla okanye bathengise iilayisensi ezi-2: kwindalo nganye okanye kubomi bonke.
Ngokucacileyo, abadali banokufaka eyabo ikhowudi yentengiso (okanye iqonga) kwimixholo yabo xa befuna ukubanika simahla.
Iiwebhusayithi kunye namaphepha angenamkhawulo
Unokwenza iiwebhusayithi ezingasikelwanga mda kwaye kwiwebhusayithi nganye uyile amaphepha ewebhu angenamda.
Sinokulandelwa kwetrafikhi eyakhelweyo ekuncedayo ukuba ubale ukutyelelwa kunye nokujongwa kwiphepha, ezi manani zinokulandelelwa mihla le.
Ngokuqinisekileyo unokufaka elinye iqonga lakho lomkhondo, njengeGoogle Analytics ngokulula nangokukhawuleza.
Iindawo eziphendula ngokupheleleyo kunye nemixholo
Zonke imixholo kunye neendawo ziphendula ngokupheleleyo kwaye zinobuhlobo eziphathwayo, ziyilelwe ukusebenza kuso nasiphi na isisombululo sekhusi sazo naziphi na izikhangeli zangoku.
Kwaye okubaluleke ngakumbi, iPhaneli yokuLawula kunye noMsebenzisi ujongano nazo ziphendula ngokupheleleyo, abasebenzisi banokulawula kunye nokwenza iisayithi ngalo lonke ixesha naphina.
Inkqubo yethu yenzelwe ukunika iiwebhusayithi zakho kunye nokugcina esona santya siphezulu kunye nokusebenza.
Khetha kwimixholo engaphezulu kwama-95 yesiza esenziwe kuyo yonke into ongathanda ukuyenza.
Inkululeko yoyilo iyonke
Yila kwaye uphuhlise indawo yakho kanye ngendlela oyifunayo ngokudonsa kunye nokulahla kwethu okutsha.
Ukuphucula isiKhangeli seMedia
Bonisa imifanekiso yakho, iividiyo okanye nayiphi na imathiriyeli yemultimedia kuyilo lwegalari entle kunye nesikhangeli sethu esinamandla seMedia.
Indawo yokuGcina entle entle
Yazisa kwaye uthengise izinto zakho zedijithali okanye ezibonakalayo kunye neenkonzo okanye ishishini kwivenkile entle ekwi-intanethi.
Ivenkile kunye noMphathi weMveliso
Landa yonke iodolo kwaye ulawule uluhlu lwakho lwazo naziphi na izigqibo: idesktop, ilaptop, ithebhulethi okanye iselfowuni.
Nika isisombululo esithembekileyo sentlawulo esenza ukuba ukuthengiselana kwi-Intanethi kube lula kwaye kukhuseleke kuwe nakwabaxhasi bakho. Yamkela amakhadi etyala, iPayPal, iStripe, Authorize.net, iintlawulo ngaphandle kweintanethi kunye nokunye-ikhomishini yasimahla ngokupheleleyo.
Ukukhuthaza ukuthengisa ngaphambili kwendawo yokugcina ngokubonelela ngezaphulelo zonyaka kunye nokuhanjiswa simahla kwiiodolo zemisitho ekhethekileyo.
Sivumele ukuba sikhulise ishishini lakho kwaye silenze libhabhe phezulu !!!
Yakha iwebhusayithi yakho kunye neevenkile ngoku